ASEM နိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိင်ငံ၊ နိဝင်ဘာ ၂၀-၂၁၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် - European External Action Service
EEAS homepage > Asia-Europe Meeting (ASEM) > ASEM နိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိင်ငံ၊ နိဝင်ဘာ ၂၀-၂၁၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်
ASEM နိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိင်ငံ၊ နိဝင်ဘာ ၂၀-၂၁၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်
15/11/2017 - 15:03
နိဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၂၁ရက်နေ့တို့၌ မြန်မာနိင်ငံနေပြည်တော်မြို့တွင် ၁၃ကြိမ်မြောက် ASEM နိင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသို့ အာရှနှင့်ဥရောပတို့မှ နိင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများတက်ရောက်ရန် စုဝေးရောက်ရှိ ကြမည်ဖြစ်ပြီး အီးယူအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Federica Mogherini မှာလည်းဥရောပအဖွဲ့၏ညှိုနှိုင်းရေးမှုးအ ဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်မည်
အာရှ-ဥရောပအစည်းအဝေးဖြစ်သည့် ASEM မှာအာရှနှင့်ဥရောပတို့အကြား ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်း၍ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရန်အတွက် တစ်မူထူးခြားသည့်အလွတ်တမ်း စင်္ကြန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ နိင်ငံရေး အရညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများအား မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုအားကောင်း စေရန်နှင့် လူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်သွားရန်ဖြစ်သည်။ ASEM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ယန္တ ရားစနစ်မှာ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာတစ်ခုအနေဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်သည့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု စသည်တို့အပြင်ကျယ်ပြန့်လှသည့်လုံခြုံရေးအရစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သည့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ အာဏာဝါ ရေကြောင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဆိုင်ဘာပြဿနာစသည်တို့အား အလေးပေး၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။အာရှ နှင့်ဥရောပတို့မှ မိတ်ဖက်နိင်ငံပေါင်း ၅၃နိင်ငံတို့အားအတူတကွ စုစည်းခေါ်ဆောင်လာသည့် ASEM မှာ အမျိုး မျိုးသောအဆင့်များ၌သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက်သော်လည်းကောင်း အစည်းအဝေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ လုပ်ငန်းများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုနှစ် ASEM FMM13 မှာငြိမ်းချမ်းရေး၊ စဉ်ဆက်မ ပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုစသည့်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အလေးပေးဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းသမားများအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုနှင့် လူငယ်များအတွက် အထူးပမာဏခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကိုလည်း FMM13 မတိုင်မီစီစဉ်ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုသတင်း များဖတ်ရှု့နိင်ရန် Twitter ရှိ #ASEMFMM အားဆက်လက်စောင့် စားကြည့်ရှု့ပါ။
/file/asem-foreign-ministers-meeting-nay-pyi-taw-myanmar-20-21-november-2017_skASEM Foreign Ministers Meeting, Nay Pyi Taw, Myanmar, 20-21 November 2017
ASEM Senior Officials' Meeting and ASEM Pathfinder Group on Connectivity, Brussels, 21-23 June 2017
Call for interest: European Union Visitors Programme 2021 The European Union Visitors Programme (EUVP) is an individual visitors’ programme that was established by the European Parliament and the European Commission in 1974. What is the EUVP? The EUVP isaprogramme designed to enable active or future decision-makers and opinion-moulders outside the
Trade Talks! 6th round of EU-AUS FTA negotiationsA team of European Union trade negotiators met their Australian counterparts in Canberra from 10-14 February for negotiations towards the EU-Australia Free Trade Agreement.
European Union Visitors Programme: Applications close 22 May!The European Union Visitors Program (EUVP) enables young current or emerging leaders in government, politics, the media and other key fields to visit and become acquainted in-depth with the Institutions of the EU as guests of the European Parliament and the European Commission. By so doing they